Mizotra Amin’ny Lalana Tokony Ho Izy Ve Ireo Vehivavy? Adihevitra Momba ny Miralenta Mandrehitra Ny Tontolom-Bolongana Bangla Amin’ny Andro Iraisam-Pirenena Ho An’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2017 12:21 GMT
Ny 8 Martsa 2007, raha izao tontolo izao nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, ny tontolom-bolongana Bangla kosa niverina amina adihevitra misamboaravoara teo amin'ny iray amin'ireo fanontaniana ankafiziny – ny olana mikasika ny miralenta.
Na izany aza, raha izao tontolo izao mbola miady hevitra mikasika ny fampizakana tena, ny fanoherana ny herisetra sy ny fitoviana, izay naha-samihafa sy nisarika ny saina dia ny tontolo Bangla mbola miady hevitra hatrany mikasika ireo vehivavy miasa ivelan'ny tranony sy ny fomba fiankanjon'izy ireo.
Mizotra amin'ny làlana tokony ho izy ve ireo vehivavy rehefa mivoaka ny faritry ny trano fonenany ? Nanembona ny lasa ilay bilaogera Rongheen momba ny olan'ireo vehivavy ao an-tokantrano. Heveriny fa fitahan'izao tontolo izao amin'ny fampanantenana poaktay momba ny zo sy fahalalahana ireo vehivavy sady, rehefa mivezivezy any ivelany ireo vehivavy mba hitady ny anjara masoandrony, dia mijaly vokatr'izany ny fifaankatiavan'ny mpianakavy.
Finaritra ny atao ho fitaovana hanome fahafinaretan'ny maso ve ireo vehivavy? Raha tsia, nahoana izy ireo no hita (zara raha mitafy, matetika) any anatin'ireo dokambarotra samihafa mikasika ireo entam-barotra? Manombatombana i Trivuj hoe, amin'io fijery io, mora jonoina ireo vehivavy ary angamba manadino ny tena izy mifandray amin'ny tolona ho an'ny zon'izy ireo. Araka ny filazany, tokony hikaroka ny fahalalahana misaina kokoa noho ny fahalalahana miakanjo ireo vehivavy Bangla. Mino i Shayon, bilaogera fa manolotra ny tenany ho jono amin'ny fandratràna ireo vehivavy amin'ny tsy fiankanjoana sy / na amin'ny fitondrana tena maotina loatra miaraka amin'ireo lehilahy. Araka ny filazany, tsy ho tanteraka mihitsy hoe vehivavy mitafy burqa no ho voaratra! Ankoatra izay, mizara fanakianana izy mikasika ny fahasarotana faratampony amin'ireo vehivavy na malalaka loatra (izay mamporisika ireo vehivavy hampidera ny fananahany) na ireo fatra-mpitahiry ny nentin-drazana (izay tsy manome ny zo fototra ho an'ireo vehivavy, ohatra: ny fitondrana Talibàna ao Afganistana).
Izany akory tsy midika fa tsy resahan'ireo bilaogera ilay andro fankalazana. Manao izany izy ireo, ary maro an'isa amin'izy ireo no kely finoana manoloana ny zava-mitranga. Araka ny voalazan'i Amar Jato Katha, amin'ity anio ity – nanjary ho indray andro iray natao fotsiny ho an'ireo kabary, diabe ary ireo fivoriana – miezaka ny handinika akaiky ny olan'ireo vehivavy ireo lohandohany fa tsy hanandrana hanao izay tena hisian'ny fiovàna. Mitovy hevitra aminy i Dhushor Chhaya. Sadia mihevitra fa tsy ampy ny miresaka fotsiny ny fampizakana tena an'ireo vehivavy fa tokony hiasa ho an'ny fanatanterahana azy isika rehetra. Etsy andaniny, Raag Imon mihevitra fa ilaina ny andro toy izao mba hidirana amin'ny saintsika sy mba hampahatsiahivana antsika ny dikan'ireo olana izay tsinontsinoavintsika eny amin'ny fahazarantsika andavanandro na dia miresaka azy ireo aza isika.
Koa karazam-behivavy toy inona ary no tena idealy? Ekena, tsy misy loka natao ho an'izay maminavina! Io no rongony mahavita mampifandanja ny tokantrano sy ny asa; io no reny tonga lafatra, vady, mpiasa izay tena miorim-paka ao anaty vondrom-piarahamonina misy azy sy ny fianakaviany izay apetrany ho loha-laharana, na dia miezaka aza izy ny hametraka ny maha-izy azy manokana. Zavatra ao anatin'ireo andalan-tsoratr'ilay reny Astomeye. Tena andraikitra mampihorohoro tokoa izany!